Uma sesifuna-antibiotic entsha, kungani ungase uqale? Othile uthi ungathanda ukuya sezwe izimbuku noma esiqhingini desert. Ososayensi bathi le akanayo ukuya ezindaweni ezikude. Kodwa kuthiwani uma uqala ukufuna izinto zokusetshenziswa nekama obukhulu nesilevu wesilisa?
Ulungele ucwaningo kakhulu ezingalindelekile
Odokotela njalo ukubeka nakho futhi ucwaningo. Ngezinye izikhathi ukufunwa imithi emisha ngempela abamedelelayo isayensi futhi wenze intuthuko kwezokwelapha. Ngakho, ukutholakala yamuva wathola amagciwane ayakwazi ukusiza ekukhiqizeni uhlobo olusha antibiotic. Into eyangimangaza kunazo zonke kule ukutholakala - ukutholakala izinto zokusetshenziswa. It kuvela amabhaktheriya ebandakanya nesilevu zabesilisa kungaba nomphumela ezuzisayo phezu nempilo yezigidi zabantu.
Fashion nesilevu emuva
Njengoba ubona, imfashini nesilevu emuva. Futhi manje zonke ezinye azizwa mod iphoqelelwe ukuba ikhiphe ngobuso izimila obukhulu.
Ngo izindevu khona ardent bangi
Nokho, nezitha 'ukuhlobisa' futhi ukuveza imibono yabo. Bakholelwa ukuthi inqubo izinwele amila ngobuso kunalokho ezibuhlungu. Hhayi-ke, uma nibekezela nishaywa isikhashana bese izimila oyifunayo, khona-ke ungakwazi ukusho Some inhlanzeko. Eqinisweni, Iron agumenti labamelene wentshebe ukwesatshwa ncono emphilweni yawo siqu. Ngokwesibonelo, kwenye inhlolo-vo yamuva olwenziwa e New Mexico, ososayensi bathola e izimila ebusweni iminonjana amagciwane emathunjini, kuyefana ukuthi ngokuvamile zitholakala amasampula kuso. Qaphela ukuthi imiphumela zisekelwe isampula okungahleliwe. Ukuze yakha isithombe esiphelele, odinga ukubhekana, okungenani ngo eziningana ukuhlolwa ezimele.
Can izindevu zibe naso egazini izifo nosocomial?
Ucwaningo lwamuva yesayensi, lwenziwe esibhedlela US, wathola iziphetho ngempela eziphikisa. Ochwepheshe bahlola amagciwane ebusweni 408 odokotela kanye nabasebenzi, kokubili nge izindevu, futhi ngaphandle kwazo. Empeleni, kulolu kwaba kwakungenxa yesizathu esihle.
Ososayensi bathi izifo atholakala ezibhedlela kungenye yezinto ngokufa ezandleni izibhedlela. Iziguli eziningi uya for ukwelashwa esibhedlela, uthole izifo, okuyinto abazange babe ngaphambi esibhedlela. Futhi lokhu samukelwa basola ezandleni ezingcolile kwabasebenzi, akavele amajazi ezimhlophe, izesekeli kabi disinfected ngisho othayi. Kuyinto ithuba ukuhlola nesilevu.
Abacwaningi bamangala lapho bethola ebusweni amagciwane ngaphezu kwalokho amadoda darnel odokotela gladkovybrityh. Kwatholakala ukuthi umongo okuhlala kuwo iziguli methicillin ukumelana Staphylococcus aureus exhunywe isikhumba bushelelezi phezu izihlathi kathathu kaningi. Njengoba sazi, lolu hlobo webhaktheriya yilona ukumelana kunazo nemithi eminingi etholakalayo. Lokho ungumthombo oyinhloko izifo atholakala ezibhedlela.
Ososayensi ngokushesha hypothesized. Ukushefa luthinta isikhumba mikrossadiny. Kuyinto lezi elimazayo futhi kungabangela yangempela ikoloni virus. It kuvela ukuthi izinzuzo nesilevu ezikhona ngempela.
Kuyaqhubeka ukuthungathwa izinto ezintsha zokusetshenziswa abanike imithi elwa namagciwane
Kodwa bebuza izingqondo ososayensi abazange bayeke phezu impumelelo. Kwanqunywa ukuba ukuhlola imininingwane flora nesilevu. amasampula ekhethiwe bathunyelwa samagciwane Adamu Roberts, isisebenzi-University College London. Ngakho, kusukela womuntu nesilevu usosayensi ongathuthuka kuzo amagciwane 100 ehlukile, kuhlanganise omunye okuyinto e emathunjini amancane. Nokho, lokhu akusho ukuthi amadoda darnel ayibukeki ngemva inhlanzeko. Ngokusho kochwepheshe, lena iphethini evamile, futhi amadoda nezinwele ebusweni abanalutho okufanele ukhathazeke ngakho.
Izinzuzo nezilwanyana ezincane
Ngokuvamile sibona amagciwane e izitha zethu. Kodwa izinkulungwane eziningi zeminyaka, banayo mncintiswano esintamo nomunye ezingeni virus. Basuke ulwela ukudla, izinsiza kanye isikhala. Ngokuhamba kwesikhathi, la magciwane ziye zashintsha, futhi, ekugcineni, isintu uyakwazi ukuthola kuzo esinamandla ekulweni kwabafowabo. Ngakho sayithola antibiotic. Kuyaziwa ukuthi i-penicillin ekuqaleni lisuselwa ezinhlamvu fungal Aleksandrom Flemingom.
Izwe liye abadingi-antibiotic entsha
Ngakho kungaba amagciwane okuyimfihlakalo izindevu, izingxabano ezinjalo, ukubhubhisa abafowabo? Ososayensi ngokuqapha ephendula lo mbuzo, kodwa ungalahli ithemba. Olunye uhlobo lokudla "Kwase kuqhamuka ababulali buthule" Robert okuye kwaziwa ngokuthi Staphylococcus epidermidis. Kwatholakala ukuthi lolu hlobo amagciwane Kulula ukuba sibhekane ngokuphumelelayo E. coli ka E.coli, okubangela izifo kohlelo genitourinary.
Ukuhlola kwe--antibiotic entsha imisiwe kuze kube nini. Ibiza kakhulu, ezinkulu kakhulu ingozi imiphumela engemihle. Nokho, ososayensi banethemba lokuthi kuyoba futhi ngifuna izindlela ezintsha usebenzisa nezilwanyana ezincane landa lisuka izindevu madoda. Kule minyaka engu-30 edlule emhlabeni futhi akukho imithi emisha elwa namagciwane.
Izilonda phezu umthondo. Kuka ukwelapha izilonda on the umthondo?
Mhlawumbe umkhuhlane indoda ngempela likhona
Indlela ukuqeda iphunga isikhutha ku izingubo nezicathulo: Amathiphu
"Tsiolkovsky" (spa): izithombe, izibuyekezo, ikheli
Amathonsi Engamakhambi "Holagol": yokusetshenziswa
Uchungechunge oluthi "Akukwazi kangcono": incazelo yochungechunge, abadlali kanye izindima
Kopanskoe - echibini nesokuphumula engqondo
Original izipho Christmas ngezandla zakhe
Anna Faris (Anna Faris): Umlando kanye Filmography. Ukuphakama, isisindo, nezithombe actress